Ity ny iray amin'ireo angidimby ampiasain'ny polisy alemà. Ny modely tsara tarehy: Tsara izany, miaraka amin'ny tena asany cockpit.
Ny hazavana EC135 kambana-maotera angidimby dia zavatra maro novokarin'ny Eurocopter.
Izany dia fivoaran'ny tena mamely ny MBB BO105 izay nahita fivoarana bebe kokoa ao amin'ny 1980s (atao hoe Bo 108) alohan'ny manomboka hanompo afa-tsy ho toy ny mpanao fihetsiketsehana ny teknolojia vaovao.
Ity manokana dia fitaovana nitranga fahiny tamin'i FBW (FBW) ary ny tena Fanodina tonon-taolana iray karazana vaovao, etsy an-daniny fampihenana ny ambony indrindra mahatonga feo sy hovitrovitra harerahana ara-nofo sy ny fanomezana tombontsoa hafa eo amin'ny lafiny fahaizany mamikitra sy ny tompon'andraikitra.
Nandritra ny famoronana ny Eurocopter in 1992, MBB nampiditra ny fampakaram-bady ho an'ny BO108 izay nahita mialoha amin'ny fotoana vintana eny an-tsena. Ny Frantsay ampahany Eurocopter (angidimby fizarana teo aloha ny Aérospatiale-matra vondrona) nitondra ny lanivoany ny rambony Fanodina karazana fanampiny fenestron mamela ny fampihenana ny tabataba ambaratonga sy mitondra tombony lehibe avy amin'ny fomba fijery ny mpitandro filaminana tamin'ny tany.
Ny sidina voalohany natao tao Ottobrunn akaikin'i Munich (birao sy ny orinasa mpamokatra entana prototypes) February 15, 1994. Production andian-dahatsoratra (Donauwörth) nanomboka tamin'ny 1996. Ny base modely tonga amin'ny dikan-maro sivily sy ny miaramila (EC635 (en)).
Izany dia miaraka amin'ny squirrel sy ny angidimby EC145 ekipa izay manery ny Frantsay National Gendarmerie. (Wikipedia)
Eurocopter EC145 REGA Soisa Air Rescue FS2004